Face Makeup Factory, Suppliers - China Face Makeup ထုတ်လုပ်သူများ
OEM Face Make-Up Fixer မှုန်ရေမွှား 120ml Moisturizing Oil control ပေါ့ပါးသော Microfine အခိုးအငွေ့ Makeup Setting Spray
အဘယ်ကြောင့် Setting မှုန်ရေမွှားလိုအပ်? ချိန်ညှိမှုန်ရေမွှားသည်မျက်နှာ၏အပူချိန်ကိုလျှော့ချပေးပြီးမိတ်ကပ်သည်အရေပြားနှင့်ကြာရှည်ခံစေရန်ကူညီသည်။ ၂။ မိတ်ကပ်လိမ်းရန်နေရာ။ မျက်နှာပေါ်ရှိအရေပြားများသည်အေးလာပြီးမိတ်ကပ်သည်ကြာရှည်လာသောအခါမိတ်ကပ်မှုန်ရေမွှားသည်မိတ်ကပ်ကိုနေရာချရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါဘာလဲ ? Face make-up fixer မှုန်ရေမွှားသည်သင်၏လျှို့ဝှက်လက်နက်ဖြစ်သည်။ ဖော်မြူလာတွင်အရေပြားကိုသက်သာစေရန်နှင့်ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းရန် aloe၊ green tea၊ သခွားသီးနှင့်ဗီတာမင် A, C နှင့် E တို့ပါ ၀ င်သည်။ သင့်ရဲ့ဖြီးအပေါ်မှုန်ရေမွှားသို့မဟုတ် ...
တစ်နေ့လုံး ၀ တ်ဆင်နိုင်သောကြာရှည်ခံမိတ်ကပ်ပေးသည့် Matte finish ဖြင့်အအေးဓာတ်ပါသောအရည်ဖုံးကွယ်ထားသော 6ml
အပြည့်အဝ Coverage Hydrate Concealer J202A သည်အသားအရေကိုစေးကပ်ခြင်းမရှိသောသဲအချောအတွက်ရေဓာတ်တိုးစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်မျက်လုံးအောက်စက်ဝိုင်းနီများနှင့်စူးရှသောအစက်အပြောက်များကိုဖုံးကွယ်ထားရန်အမြင့်ဆုံးဖုံးအုပ်ထားခြင်း၊ ကြာကြာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
အပြည့်အဝဖုံးအုပ်ထားသောအရည်ဖုံးထားသော 6ml matte finish 16 နာရီကြာမြင့်သောမိတ်ကပ်ဖုံးအုပ်မှုသည်အရည်အသွေးမြင့်မားပါသည်
အပြည့်အဝဖုံးအုပ် Matte liquid concealer J202 သည်အပြစ်အနာအဆာမရှိသောအသားအရေအတွက်ဖုံးအုပ်ထားခြင်း၊ တည့်မတ်ခြင်း၊
အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအညစ်အကြေးမပါသောအရည်ဖောင်ဒေးရှင်း SPF15 နှင့်ကြာရှည်ခံမည့် 20ml မိတ်ကပ်ဖောင်ဒေးရှင်းအပြည့်အဝအကျုံးဝင်သည်
အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော Matte Liquid Foundation J203 သည်တစ်နေ့လုံးကြာရှည်ခံသောလှပသော Semi-Matte finish ကိုအသားအရေအတွင်းသို့ပေါင်းစပ်ခြင်းထက်အပြည့်အဝ၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ အသားအရေကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြင့်အသားအရေဖြည့်တင်းပေးသည်။ ၎င်းသည်မညီမညာဖြစ်နေသောအသားအရေကိုပြုပြင်တည့်မတ်ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်အရိပ် ၄၀ ရှိသည်။ အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးနှင့်ကိုက်ညီပါသည်။
ပုဂ္ဂလိက Label ကိုမိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်သည်ရေစိုခံသည့်နူးညံ့သောအညစ်အကြေးရှိသောဖိအား ၅ အရောင်များ၊
ဒါဘာလဲ ? ဒီကတ္တီပါပျော့ပျောင်းသောအမှုန့်မျက်နှာကျက်သည်ကြာရှည်တည်မြဲ။ တည်ဆောက်ထားသောအရောင်ကိုနူးညံ့ချောမွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းအပေါ်ဖုံးအုပ်ထားသောဖုံးအုပ်ထားသောဖုံးအုပ်ထားသောဖုံးကိုသိုလှောင်ထားပါ။ သဘာဝနှင့်တည်ဆောက်နိုင်သောအရောင်တောက်ပမှုပေးသောအသားအရေကောင်းမွန်သောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအရောင်တောက်နေသောအမှုန့်မျက်နှာပြင်သည် ၎င်းသည်လှပသောပျော့ပျောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်တောက်ပသောအသွင်အပြင်ကိုပေးသည်။ Item NO J0207 အမှတ်တံဆိပ် Jinfuya သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်သည့်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း Mineral Blush, pigmented formula ။ အသင့်တော်ဆုံးအနေဖြင့် ...
Makeup Base Primer သည်အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ Matte Finish Mineral Infused မျက်နှာကြက်ညှာဖြင့်ပြုလုပ်သောချောမွေ့သောအသားအရေကိုဖန်တီးပေးပါသည်
ဒါဘာလဲ ? Mineral Face Primer သည်သင်၏လျှို့ဝှက်လက်နက်ဖြစ်သည်။ သင်၏မိတ်ကပ်မတိုင်မီကအသုံးပြုသောအခါ၎င်းအခြေစိုက်စခန်းသည်ဆီနှင့်ခြောက်သွေ့မှုများကိုတိုက်ဖျက်နေစဉ်သင့်မျက်နှာကိုကလေးကဲ့သို့သဘာဝကျသောသုတ်ဆေးဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဖောင်ဒေးရှင်းကို၎င်း၏အလုပ်ကိုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အလင်းရောင်အမှုန့် (သို့) မိတ်ကပ်အပြည့်အဝအတွက်သင်၏ palette (မျက်နှာ) ကိုပြင်ဆင်နေစဉ်မှားယွင်းသောနေရာများတွင်မှီဝဲခြင်းမပြုရန်သင်ဆုံးဖြတ်သည်။ Jinfuya သည်မျက်လုံး၊ နှုတ်ခမ်းနှင့်မျက်နှာတိုင်းကိုအလှအပအကောင်းဆုံးရရှိစေရန်ဖြန့်ဝေထားသည်။ သင်၏မူရင်းသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်ပြီး ...
Highlighter မိတ်ကပ် Palette မျက်နှာ Highlighter မုန့်ဖုတ်ရေစိုခံတာရှည်ခံတောက်ပအလင်းအသားအရေမျက်နှာပုံအမှုန့်
ဒါဘာလဲ ? Highlighter palette သည် Kaleidoscope palette ၏ creamy ချောမွေ့သောဖော်မြူလာသည်အရေပြားပေါ်သို့လျှောကျသွားပြီး၎င်းကိုပေါ်လွင်စေမည့်အပြင် texture ကိုချောမွေ့စေသည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်ရင့်ကျက်သောအသားအရေကိုချောမွေ့စေသည်၊ ပစ္စည်း NO J2222 အမှတ်တံဆိပ် Jinfuya သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်အမှတ်တံဆိပ်ပြုလုပ်ပါ။ 100% သဘာဝနှင့်အမျိုးမျိုးသောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ gluten၊ preservative နှင့် artificial pigment မပါဘဲရေးဆွဲထားသည်။ ရရှိနိုင်သည့်သဘာဝအရိပ်လေးခုမှသင့်တော်သည် ...